7 Izindawo zokudlela Tours Ukuze Experience EYurophu | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 7 Izindawo zokudlela Tours Ukuze Experience EYurophu
7 Izindawo zokudlela Tours Ukuze Experience EYurophu
Ukuhamba Ngezitimela, Qeqesha Ukuhamba i-Austria, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi Czech Republic, Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Germany, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi ENetherlands, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Izikhangibavakashi Europe
(Kugcine ukubuyekezwa On: 30/01/2021)
Hamba on an adventure ukuze bakitaza ukunambitheka yakho nemiqumbe futhi iqhaza okungcono ukudla izinkambo eYurophu. Uma ngabe Foodie okhuthele, nolwanga lwakho, kanye Instagram yakho okuphakelayo ngeke sifinyelele ngokujabula nalokho nawe uzozibonela. Kunjalo, indlela engcono kakhulu yokuvakashela i-gastronomic genius amadolobha adumile eYurophu ngesitimela. Here are our top of 7 Izindawo zokudlela Tours Ukuze Experience EYurophu.
Izincwajana zemininingwane Ezokuthutha Is The nokunobungane Way Izikhangibavakashi. This sihloko eyabhalwa sokuba umuntu afunde izindlela zemininingwane Hamba nge- Londoloza Isitimela, I Eshibhe zemininingwane Amathikithi Iwebhusayithi In The World.
1. Ukudla Tours Ukuze Experience EYurophu: Kusukela baguettes Ukuze Bistro In Paris, France
Uma kukhona omunye umuzi kungaba knock amasokisi yakho off nge lokusungula Culinary, ke sika Paris futhi kuba, Ngakho-ke, kuqala ohlwini lwezinhlelo best ukudla izinkambo eYurophu. Ngenxa yalokho, abaningi izinkambo ukudla ukuthi ukusebenzisa Paris kufanele kunalokho ubizwe educations ukudla ngoba licwile umlando. Amasiko sezixoxelwe phakathi namakhulu eminyaka.
Baphefumulelwa uthando waseParis labangela ukuqala komkhakha.
Konke imbozwe kusuka izisekelo lwesinkwa noshizi ukuba uju bazo abadumile, foie Gras kanye rillettes okuzenzela kanti Armagnac. Ngaphezu kwalokho, ungase futhi uku ku waseParis labangela ukuqala komkhakha cafe isiko.
Igcine indlela yakho ngokusebenzisa ohlangothini ezitaladini futhi mangaza wena at zokudlela eziningi kanjani Chic, amathilomu, amadeli, futhi boulangeries kukhona. Ngenxa yalokho, uzovezwa enhlanganisweni ephelele yezindlela zokupheka ezindala kanye nokusha nokuthrendayo emkhakheni wezidlo.
2. Ukudla Extravaganza: Amsterdam, Abase Netherlands
Uma ufuna ukubona uhlangothi oluhlukile Amsterdam futhi Foodie yayo endaweni yesehlakalo, ukuhlola nasemagcekeni ezitaladini emuva yasesiFundeni Jordaan. Ngenxa yalokho, uzothola purveyors emihle ukudla ngimagange ukwabelana indalo yabo kanye ukunikeza ngezinga elithile ukuze siqonde ifa Culinary edolobheni esicebile-Indonesian.
Sincoma ukuthi uzame enzuzweni apula at yisakhiwo sodumo cafe engu-400 ubudala, cafe Papeneiland. Ungase uzame isoseji ngibhema elenziwe iresiphi umndeni ekhulwini ubudala futhi ufunde indlela Dutch ukudla inhlanzi.
3. Ubuciko Of Craft Beer & Ukudla EPrague, I-Czech Republic
Uma uzithola ePrague, ukwenza lokho hipsters ukwenza futhi ujabulele izikebhe ubhiya kanye imakethe yokudla uhambo. Ungathatha ngisho uhambo isazi ubhiya. Bayokujabulela ukuba sihambe nawe kancane Pivo (ubhiya) uhambo owawuzofika ongafani nanoma yimuphi.
Ngokwemvelo, izikebhe ubhiya njalo ezijatshulelwa ukudla ezimbalwa ukukhetha morsels wendawo. Ngaphezu kwalokho, futhiou kungaba uzame amaqanda scotch noma Czech amadombolo nge yenkomo ithoswe yathamba ukuqamba kodwa ezimbalwa ingcebo Foodie lasePrague. Kuyinto eziqondile uhlu lwethu engcono ukudla izinkambo eYurophu.
4. Ukudla Tours Ukuze Experience EYurophu: Endala Amasiko in Madrid, Spain
Ukuze adventure Bonafide Foodie, Madrid akusho ukudanisa! Meander ngokusebenzisa Madrid futhi ahlangane nabathengisi zendawo restaurateurs. Zama iwayini wendawo noshizi ujatshuliswa mlando u-Anton Martin Market. Have ezinye, ngokobufakazi obukhona, the cheesecakes ubhedu emhlabeni, ezinye zazo ephekwe Ohhavini engu-engamakhulu ubudala.
5. Yiphunga Umuzi Kusukela An Insiders Ethile: Venice, Italy
Bhuka uhambo uma ungafuni ukuba wagijimela Venice. Incwadi nomuntu owazi ins kanye nasemigwaqweni ngaphandle komuzi, indlela okungenzeka agweme izixuku futhi ake uthola ezinye amagugu afihliwe. Ngokwesibonelo, ukugibela gondola ngaphesheya komsele ukuze yokudlela pasta aphuze ingilazi Prosecco ngaphambi hlola ezinye iwayini Amabha abadumile, lidumile wendawo Casanova sika.
6. Ukudla Tours Ukuze Experience EYurophu: I-International Food Scene in Berlin, Germany
Berlin sika ukudla yesehlakalo kulungile mkhuba nokudla international zegolide, futhi ngenxa yalokho, yindawo enhle yokwenza abangane uma uhamba ngezidlo. Lutho esenza abantu babuthanele akamuhle ukudla owenza.
Sincoma ukuthi sicabangele ngezifiso ukudla uhambo nge lendawo lapho ungakwazi sibhukule wakho siphinde silungise wena idili bendabuko, Berlin-isitayela.
Uma ungafuni ukwenza yonke into ngokwakho:
Bheka iMakethe yaseTurkey yaseKreuzberg noma ume (noma ezintathu) at amathilomu ehlukahlukene amabhikawozi.
7. Kuvele Qinisekile Foodie Experience: Vienna, Austria
EVienna zonke charm, Nokho lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi uma kuziwa okuthandwa. It has a ubuqiniso palpable futhi kufanele uqale nge ukuvakashela zakudala saseVienna ikhofi indlu. Kusukela endlini ikhofi, ungenza indlela yakho Naschmarket ethandwa, gem ngoludala kanye ezihlukahlukene amakhono Austrian ezifaka shizi uviniga.
Uma ungadli nesoseji bese ukuthatha isithombe ngakho phezu igremu uma uku Wurstelstand, Wawukuphi ngisho khona? 🌭But ngempela, banamasoseji amangalisa kakhulu! Geza phansi nabanye iwayini Austria at sela mlando kanye ukuqeda konke off kahle nabanye dessert delish ngokuvakashela omkhulu ushokoledi esitolo. 🍫
Ukudla Tours Ukuze Experience EYurophu: Isiphetho
The best ukudla izinkambo eYurophu zenzelwe nje nishaye ingqondo yakho nolwanga. Akukho ukushoda ongakhetha.
Nomaphi lapho uya, ngibhekabheka uhlu tours ukuthi obungenza ezifanela kahle wena.
Khetha lokho ongathanda isipiliyoni kanye nokusetshenziswa Londoloza Isitimela ukuhamba izidingo zakho isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “7 Izindawo zokudlela Tours Ukuze Experience EYurophu ” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-food-tours-europe%2F%3Flang%3Dzu ‎– (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Ngo isixhumanisi esilandelayo, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, lokhu kuxhumana ukuze IsiZulu imizila amakhasi okufikela, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / de ukuba / tr noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu olikhethayo.
Ukudla FoodScene FoodTour Instagram IzitimelaEEurope Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi